Isibhamu se-Zirconium oxide ceramic China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > Ubunjiniyela beCeramic Component > I-Structural Ceramic Component > Isibhamu se-Zirconium oxide ceramic
I-Model No.: JH.SC.019
Namuhla, ibhuloho ye-ceramic iye isetshenziselwa ukuchelela kwezolimo ngenxa yezimpahla zabo ezivelele zokugqoka nokulwa namakhemikhali kunezensimbi .. Kuyinto inguquko enkulu ekunkeleni kwezolimo. Inombono ongcono kakhulu wekhwalithi ye-spary kanye nokunemba kokugeleza ngebasi le-ceramic.
Siyakwazi ukukhiqiza izinhlobo eziningi zebhilidi ye-ceramic sprial nge-injection engumjovo wokugaya, noma indlela yokucindezela eyomile yokucindezela. Konke kunomzimba obunzima kakhulu futhi unobunzima be-ceramic, kulula ukuthola ukubekezelelana okunamandla ngemuva kokudala ngokuqondile.
Siyakwazi ukukhiqiza zonke izibhamu ezihlukahlukene ze-ceramic design. Kungakhathaliseki ukuthi kubonakala kanjani noma ukukhiqizwa kwamanani okunciphisa izindleko, singakusiza.
Ibhuzi Elimelana Nemikhiqizo
Umbukiso we-Ceramic ohambile